As of July 1, 2018 – Twelve professions previously reserved for Thais now permitted to foreigners. – Foundation for Education and Development
Edited and translated by FED
Adul assured shop owners they would still be able to hire foreign staff, but only for general chores such as handing goods to customers and handling inventory – not handling payments or giving change money to customers.
ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ကစပြီးတော့ နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားတွေကို ကန့်သန့်ထားတဲ့ အလုပ် ၃၉ မျိုးထဲမှ ၁၂ မျိုးကိုစတင်လုပ်ခွင့်ပြုတော့မည်ဟု အလုပ်သမားဝန်ကြီးက အတည်ပြုပါတယ်။
၁၉၇၉ မှစပြီး ထိုင်းအစိုးရကသတ်မှတ်ထားတဲ့ နိုင်ငံခြားသားများလုပ်ခွင့်မရှိတဲ့ ထိုင်းတွေအတွက် ဦးစားပေးအလုပ်အကိုင် ၃၉ မျိုးထဲက အခုလို ၁၂ မျိုးကိုပေးလုပ်မှာဖြစ်ကြောင်း ကြာသပတေးနေ့က ကြေညာချက်ထုပ်ပြန်ပါတယ်။
အလုပ်သမားဝန်ကြီးက အဲ့ဒီလိုအလုပ်အကိုင်တွေကို (ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့သူတွေအတွက်) လုပ်ကိုင်လျက်ရှိတဲ့ကိုသက်ငြာထောက်ထားပြီးကြားဖြတ်စီစဉ်ပေးတဲ့သဘောပါ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော ဇူလိုင် (၁)ရက်နေ့ဆို ချိုးဖောက်သူတွေမှန်သမျှ ဖမ်းဆီးခံရတော့မှာဖြစ်လို့ပါ။
နိုင်ငံခြားသားတွေကို အခုလုပ်ခွင့်တိုးပေးလိုက်တဲ့အလုပ် ၁၂ မျိုးကတော့ ကာယခွန်အားစိုက်ထုပ်ပြီးလုပ်ရသည့်လုပ်ငန်းများအဖြစ် ထိုင်းအလုပ်သမားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသည့် မဖြစ်မနေ နိုင်ငံခြားသားတွေသာလုပ်ရဖို့ဖြစ်တဲ့ (အလုပ်ကြမ်း)အလုပ် ၁၁ မျိုးဖြစ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ သီးသန့်လုပ်ကိုင်ခြင်းမျိုးစတာတွေပြုလုပ်ခွင့်မရှိပါ။
အဲ့ဒီ လုပ်ခွင့်ရတဲ့ ၁၁ မျိုးကတော့ စိုက်ပျိုးရေး၊ တရိစ္ဆာန်ထိမ်းသိမ်းမွေးမြူရေး၊ သစ်တောနှင့်စက်စပ်လုပ်ကိုင်သည့်လုပ်ငန်း၊ ငါးလုပ်ငန်း၊ အခြားသော ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်မဆိုင်သည့်လုပ်ငန်း၊ အုပ်စီခြင်း၊ လက်သမား၊ အခြားဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာအလုပ်ကြမ်းများ၊ မွေ့ရာချုပ်လုပ်ခြင်း၊ ဂွမ်းဆောင်ရက်/ချုပ်ခြင်း၊ အသုံးအဆောင်ဓါးကိရိယာလုပ်ခြင်း၊ဖိနပ်လုပ်ငန်း၊ ဦးထုပ်လုပ်ငန်း၊ အထည်ချုပ်၊ အိုးထိမ်းသည်၊ ကြွေထည်လုပ်ငန်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းအစိုးရအသိအမှတ်ပြု ကျွမ်းကျင်လက်မှတ်ရှိ (ကျွမ်းကျင်သူ)နိုင်ငံခြားသားအနေဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာ၊ ဗိသုကာနှင့် စာရင်းကိုင်တို့အဖြစ်လုပ်ခွင့်ရှိသည်။ဒီသုံးခုကိုလတ်တလောမှာ လုပ်ခွင့်ပြုရတဲ့အကြောင်းကတော့ အာဆီယံနိုင်ငံအသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ ကတိက၀တ်ပါ ဒေသတွင်းအာဆီယံနိုင်ငံမှာ (ကျွမ်းကျင်)အလုပ်သမားများ လွတ်လပ်စွာပြောင်းရေ့ွှလုပ်ကိုင်ခွင့်မူအရကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းတွေအတွက် ကျန်တဲ့ ၂၈ မျိုးသောအလုပ်များကတော့
ပန်းပုလုပ်ငန်း၊ လက်ချုပ်ထည်လုပ်ငန်း၊ ဖျာရက်လုပ်ခြင်း၊ မီးဖိုချောင်သုံးအတွက် အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းအဖြစ် ကြိမ်- လျော်- ကျူ- ကောက်ရိုး နှင့် ၀ါတို့မှထုပ်ကုန်ပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ အလှဆင်လက်လုပ်ဖယောင်း-ပိုးစက္ကူပြလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း ထိုင်းရိုးရာဝိသေသများပါဝင်သည့် လက်မှုအနုပညာထည်လုပ်ငန်းများ၊ ၊ယွန်းထည်လုပ်ငန်း၊ ထိုင်းရိုးရာဂီတအသုံးအဆောင်များထုပ်လုပ်ခြင်း၊ ရိုးရာထိုင်းအရုပ်များပြုလုပ်ခြင်း၊ ရွှေထည်လုပ်ငန်း၊ ငွေထည်လုပ်ငန်း၊ ကြေးလုပ်ငန်း၊ သပိတ်၊ ပိတ်ထည်ထီးလုပ်ငန်းနှင့် ဗုဒ ရုပ်ပွားတော်နှင့်ဆက်စပ်သည့် ပုံ-ရုပ်ထုလုပ်ငန်း၊ ထိုင်းအက္ခရာစာသားနှင့်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း နှင့် ထိုင်းပိုးထည်လက်ချုပ်လုပ်ငန်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းမှ လိုင်းကားမောင်နှင်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်လိပ်ခြင်း၊ ဈေးဆိုင်နှင့်အခြားသောလက်လီဒိုင်ဆိုင်များတွင်ဈေးရောင်းခြင်း၊ လှည့်လည်ဈေးရောင်းချဖြင်း၊ လေလံတင်ရောင်းခြခြင်းဆိုင်ရာ၊ စိန်-ကျောက်သွေးခြင်း၊ အလှပြင်နှင့်ဆံပင်ညှပ်ခြင်း၊ ဒေသခံဈေးရောင်းကိုယ်စားလှယ်၊ ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ၊ဧည့်လမ်းညွှန်၊ လမ်ဘေးဈေးသည်၊ ဘာသာရေးနှင့်ကိုယ်ရေးအတွင်းရေးမှူုးဆိုင်ရာလုပ်ငန်း၊ ထိုင်းရိုးရာအနှိပ်သည်လုပ်ငန်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး အလုပ်သမားဝန်းကြီးက ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့ နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားတွေ ဆက်လက်ငှားရမ်းထားပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ် ဒါပေမဲ့ ဆိုင်ရဲ့အထွေထွေလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဘဲရမယ် ဥပမာအားဖြင့် ဈေးဝယ်သူကို ပစ္စည်းယူပေးတာတို့ ပစ္စည်းဘောင်ချာပေးတာတို့ဘဲလုပ်ခွင့်ရှိမယ်၊ ငွေကြေးနှင့်ဆက်စပ်လို့ ပြန်အမ်းတာ-လက်ခံယူတာတွေလုပ်ခွင့်မရှိပါဘူးတဲ့။
အလားတူဘဲ နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားဟာ ယာဉ်မောင်းနှင်တဲ့အခါ အလုပ်ခွင့်နဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ဧရိယာအ၀န်းဝိုင်းမှာဘဲ မောင်းနှင့်ခွင့်ရှိပါတယ်တဲ့။
philippe2018-09-21T12:01:25+07:00June 26th, 2018|